Fizahan-tany, fiovan'ny toetrandro, Net Zero: ny vina vaovao eran'i Saudi Arabia ho an'ny COP26
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Fizahantany, Fiovan'ny toetr'andro, Net Zero: vina vaovao manerantany ho an'ny COP26 an'i Arabia Saodita
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Fizahantany, Fiovan'ny toetr'andro, Net Zero: vina vaovao manerantany ho an'ny COP26 an'i Arabia Saodita
Fiaraha-mientana eran-tany vaovao dia hanafaingana ny tetezamita ataon'ny indostrian'ny fizahantany mankany amin'ny Net Zero (PRNewsfoto / Ministeran'ny fizahan-tany Arabia Saodita)
Mampivondrona ireo mpilalao fizahan-tany i Arabia Saodita hamaly ny fiantraikan'ny areti-mandringana manerantany ary ny maha-zava-dehibe ny fomba fiasa mitambatra.
The Transition to Net Zero: fandraisana andraikitra vaovao ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany
Ny indostrian'ny fizahantany maneran-tany dia tompon'andraikitra amin'ny 8% amin'ny famoahana entona entona manerantany
Navoakan'i Arabia Saodita androany, ny Fanjakana dia nanao laharam-pahamehana ny hetsika maika hanohanana ity sehatra manan-danja ity amin'ny fifindrany ho aotra.
Ny Fiaraha-miasa Maneran-tany Vaovao dia hanafaingana ny fifindran'ny indostrian'ny fizahantany ho amin'ny Net Zero
Nanangana ny Foibe Maneran-tany ho an'ny fizahantany maharitra (STGC) ny Governemanta Arabia Saodita, fiaraha-miombon'antoka amin'ny firenena maro, izay manafaingana ny fifindran'ny sehatry ny fizahan-tany mankany amin'ny famotsorana tsy misy aotra, ary koa ny hetsika mba hiarovana ny natiora sy hanohanana ireo vondrom-piarahamonina.
Natomboka androany avy amin'ny Printsy Satroboninahitra Mohammed Bin Salman, ny Foibe Maneran-tany momba ny fizahantany maharitra dia hanohana ny mpandeha, ny governemanta ary ny sehatra tsy miankina, mba hahazoana antoka fa ny fizahan-tany dia mamela ny fitomboana sy ny famoronana asa, ary mandray anjara amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny toetr'andro napetraka ao Paris. Fifanarahana, ao anatin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fitazonana an'izao tontolo izao ho ambanin'ny mari-pana 1.5 degre Celsius.
Ny Global Center no ho sehatra hitondra ny fahalalana sy ny fahaizana rehetra; mikendry ny ho "kintana avaratra" ho an'ny sehatry ny fizahan-tany izy io satria tafarina amin'ny areti-mandringana COVID-19 sy ny tetezamita mankany amin'ny ho avy maharitra. Maneran-tany, manohana asa fivelomana maherin'ny 330 tapitrisa ny fizahan-tany – ary talohan'ny fihanaky ny valan'aretina, izy no tompon'andraikitra tamin'ny famoronana asa vaovao iray amin'ny efatra maneran-tany.
Ny antsipiriany momba ity fiaraha-mitantana ity sy ny serivisy omeny dia hambara amin'ny fomba ofisialy mandritra ny COP26.
HE Ahmed Al Khateeb, Minisitry ny Fizahantany any Arabia Saodita dia nilaza hoe: “Ny sehatry ny fizahantany dia mandray anjara amin'ny 8% amin'ny entona entona mandatsa-dranomaso maneran-tany – ary antenaina hitombo izany raha tsy mihetsika isika izao. Ny fizahantany ihany koa dia sehatra mizarazara be. 80% ny orinasa amin'ny fizahantany dia orinasa kely sy salantsalany miantehitra amin'ny fitarihana sy ny fanohanana avy amin'ny mpitarika sehatra. Tsy maintsy ao anatin'ny vahaolana ny sehatra.
"Arabia Saodita, taorian'ny fahitana sy ny fitarihana ny Royal Highness the Crown Prince, dia mamaly io antso lehibe io amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka - izay manao laharam-pahamehana ny fizahan-tany, ny SME ary ny toetrandro - hamoronana fiaraha-miasa marobe mpiray tsikombakomba, izay hitarika , manafaingana, ary manara-maso ny tetezamita ataon'ny indostrian'ny fizahan-tany mankany amin'ny emission net zero.
“Amin'ny fiaraha-miasa sy fanomezana sehatra iraisana matanjaka dia hanana ny fanampiana ilainy ny sehatry ny fizahan-tany. Ny STGC dia hanamora ny fitomboana ary hanatsara ny fizahan-tany ho an'ny toetr'andro, ny natiora ary ny fiarahamonina. "
Gloria Guevara, Lehiben'ny Mpanolotsaina Manokana ao amin'ny Minisitry ny Fizahantany, dia nilaza hoe: "Nandritra ny taona sy taona maro, mpilalao marobe manerana ny sehatry ny fizahan-tany no niasa tamin'ny hetsika samihafa mba hanafainganana ny hazakazaka ho aotra - fa niasa tamin'ny silo izahay. Ny fiantraikan'ny areti-mandringana manerantany amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny firenena maro sy ny mpiray tsikombakomba. Ary ankehitriny, Saudi Arabia dia mihetsika mba hiara-hientana ireo mpandray anjara mba hahatonga ny fizahan-tany ho vahaolana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. ”
Gloria no CEO taloha an'ny World Travel and Tourism Council (WTTC)